Allgedo.com » 2012 » October » 28
Home » Archive Daily October 28th, 2012
Mudaharaad balaaran oo looga soo horjeedo Qaadka oo dhawaan ka dhici doona magaalada London ee dalka Ingiriiska
Todoba sano kadib markii uu bilaamay olloha looga soo horjeedo qaadka, halgan kaasoo run ahaantii qaatay waqti dheer oo kala haad, Guureyn iyo qaylo dhaan joogta ah kawaday wadankan Ingiriiska ayaa waxaa la sugayaa in dowlada Ingiriisku go’aan ka gaarto sidii qaadka UK laga yeeli lahaa, go’aankaas oo la sugayo inuu soo baxo sanadkan dabayaaqadiisa. Dhanka kalena, waxaa ka socda dad u dagaalamaya...
The 2012 U.S. Presidential election is very close and both candidates agree that Ohio will decide who gets elected President of the United States come November 6. That is why we have a political rally by one of the candidates almost every day. The state of Ohio is a microcosm of the United States with its Republican stronghold on Southern Ohio and its Democratic northeast cities of Cleveland, Youngstown,...
Xaflad lagu soo dhaweynayay Ra’isal wasaaraha Soomaaliya oo ka dhacday magaalada Odense ee dalka Denmark (sawiro+video)
Odense, Denmark (AOL) – Xaflad sii heer sara loosoo agaasimay oo lagu taageerayey Ra’isal wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Dr. Cabdi Faarax Shirdoon (Dr. Saacid) ayaa waxa ay ka dhacdey magaalada Odense ee dalka Denmark. Xafladaan oo u soo qabanqaabiyey ganacsade Nuur Abdulkhadir Ugaas oo ku nool magaalada Odense ee dalka Denmark kana soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee...
Ra’isul Wasaaraha dowlada Soomaaliya Saacid Faarax Garaad ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan uu ku dhawaaqo golihiisa Wasiirada. Warar lagu kalsoon yahay oo ay warbaahinta AOL ka heshay xarunta madaxtooyada ayaa sheegaya in lagu heshiiyay xubnihii xukumada cusub laguna dhawaaqi doono. Latashiyadii ugu danbeeyay ayaa soo dhamaaday, waxaana Ra’isul wasaare Dr Saacid uu xalay lakulmay...
Mombasa oo lagu toogtay rag lala xariirinayo Argagaxisanimo
Wararka ka imaanaya Magaaladda Mombasa ee dalka Kenya ayaa sheegaya in halkaas lagu toogtay labo nin oo lala xariirinayo argagaxisanimo. Ciidanada Booliska Kenya ayaa sheegay in ay toogteen labo nin oo xariir la leh Al-Shabaab-ka Soomaaliya. Sidoo kale Waxaa lasoo sheegayaa in Raggaan lagu toogtay Guri ku yaala Xaafadda Majengo ee Magaalada Mombaasa kadib markii Ciidamada Policeka ay Saakay weerar...
Axmed Madoobe: Maamul ay beelaha ku mideysan yihiin ayaa loo dhisayaa Jubooyinka
Hogaamiyaha Kooxda Raaskambooni Axmed Madoobe ayaa shaaca ka qaaday in si loo dhan yahay maamul loogu samayn doono goboladda Jubooyinka. Waraysi uu siiyay Idaacada BBC-da ayaa Axmed Madoobe waxaa uu sheegay in maamul ay ku mideysan yihiin beelaha Jubooyinka loo samayn doono Jubooyinka ayna taas dhawaan dhacayso. “Ma ahan in qofba uu si gaar ah ufakaro, maamul ayaa loo samaynaa Jubooyinka taasna...
Faah Faahin: Ciidamada dowlada oo dul degay Jowhar
Ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa Amisom ayaa kusii dhawaanayaa degaano katirsan gobolka Sh/Dhexe. Ciidamdan oo aad uhubaysan ayaa gaaray degaanka Qalimow oo qiyaastii 30KM ujira Magaaladda Jowhar. Saraakiil katirsan ciidamada dowlada ayaa sheegay in saacadaha soo aadan ay gaari doonaan xarunta Sh/Dhexe ee Jowhar. Dhanka kale Al-Shabaab ayaa abaabulo dagaal ka wada Magaaladda, iyagoo ugu yeraya...
Madaxweynaha dowlada oo mamnoocay In Dekedda Kismaayo Laga Dhoofiyo Dhuxusha
Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celinaysa in la mamnuucay dhoofinta dhuxusha, iyadoo u hoggaansameysa qaraar ka soo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo lagu boorriyay dowladda inay ka hor tagto tallaabo kasta oo lagu doonayo in lagu dhoofiyo dhuxusha, maadaama dhoofinta dhuxusha ay halis ku tahay deegaanka. Sidaa daraadeed, waxay dowladdu walaac qoto-dheer ka muujinaysaa cid kasta oo...
Nin Bambooyin ku weeraray ciidamada dowlada oo ladilay
Cidamada dowlada Soomaaliya ayaa toogtay nin katirsanaa Al-Shabaab kaas oo bambooyin ku weeraray ciidamada dowlada. Ninkan oo lagu sheegay Wiil dhalinyaro ah ayaa lagu toogtay xaafada Towfiiq ee degmada Yaaqshiid. Taliyaha ciidamada danbi baarista ahna Afhayeenka Booliska C/lahi Xasan Bariise ayaa sheegay in Ninkan uu katirsan yahay Shabaab ciidamadana ay toogteen kadib markii uu weerar qaraxyo ah...